Idatha enkulu, uXanduva oluKhulu: Ii-SMB zinokuthi ziphucule njani iiNdlela zokuThengisa eziNgaphandle | Martech Zone
IDatha enkulu, uXanduva olukhulu: Ii-SMB zinokuziphucula njani iiNdlela zokuThengisa eziNgaphandle
NgoLwesihlanu, Februwari 4, 2022 NgoLwesihlanu, Februwari 4, 2022 Meghan Bazaman
Idatha yabathengi ibalulekile kumashishini amancinci naphakathi (SMBs) ukuqonda ngcono iimfuno zabathengi kunye nendlela abanxibelelana ngayo nophawu. Kwihlabathi elikhuphisana kakhulu, amashishini anokugqama ngokuxhasa idatha ukwenza impembelelo enkulu, amava obuqu kubathengi bawo.
Isiseko sesicwangciso esisebenzayo sedatha yomthengi kukuthembela kwabathengi. Kwaye ngokukhula kokulindela ukuthengisa okucacileyo ngakumbi kubathengi kunye nabalawuli, akukho xesha lingcono lokujonga indlela osebenzisa ngayo idatha yabathengi kunye nendlela yokuphucula iindlela zokuthengisa ezihlakulela ukuthembeka kunye nokuthembela kwabathengi.
Imigaqo iqhuba imithetho engqongqo yokhuseleko lwedatha
Amazwe anje ngeCalifornia, Colorado, kunye neVirginia baphumeze eyabo imigaqo-nkqubo yabucala malunga nendlela amashishini anokuqokelela kwaye asebenzise ngayo idatha yabathengi. Ngaphandle kwe-US, uMthetho woKhuseleko loLwazi loBuqu waseTshayina kunye ne-EU's General Data Protection Regulation yomibini ibeka izithintelo kwindlela idatha yobuqu yabemi inokusetyenzwa ngayo.
Ukongeza, abadlali abakhulu betekhnoloji babhengeze utshintsho kwindlela yabo yokulandela idatha. Kwiminyaka emibini ezayo, iikuki zomntu wesithathu ziya kuphelelwa lixesha Google Chrome, intshukumo elandela ezinye iibhrawuza ezinjengeSafari kunye neFirefox esele iqalisile ukuvalela iikuki zokulandela umkhondo zomntu wesithathu. iapile sele iqalile ukubeka izithintelo kwidatha yomntu eqokelelwe kwii-apps.
Ulindelo lwabathengi luyatshintsha ngokunjalo.
I-76% yabathengi ngandlel' ithile okanye bakhathazeke kakhulu malunga nendlela iinkampani eziqokelela kwaye zisebenzise ngayo idatha yazo yobuqu. Ngaphezu koko, i-59% yabathengi bathi bangathanda ukuyeka amava omntu (umzekelo, iintengiso, iingcebiso, njl.) kunokuba umsebenzi wabo wedijithali ulandelelwe ziimpawu.
UGartner, uBucala beNkcazo yeZenzo ezilungileyo: Ubabuza njani abaThengi ngolwazi ngexesha leNtsholongwane
Kwixesha elizayo, sinokulindela ezinye izithintelo zokukhusela idatha yomntu. Ezi zinto zikhomba imfuneko yokuvavanya kwakhona iindlela zokuthengisa ukuze kuqinisekiswe ukuba zihambelana nemigaqo-nkqubo karhulumente kodwa zikwabonisa utshintsho lweshishini kunye nolindelo lwabathengi.
Iindaba ezilungileyo kukuba ukukhuselwa kwedatha yabathengi sele kuphambili kwishishini kwii-SMB ezininzi.
I-55% yee-SMB eziphandwayo kwi-US yezinga ledatha kunye neteknoloji yokhuseleko lolwazi njengento ebalulekileyo kwimisebenzi yabo yezoshishino, ebonisa inkxalabo yokukhusela idatha yabathengi. (Jonga emazantsi ephepha malunga nendlela yophando.)
Ingaba ishishini lakho linxibelelana njani nedatha yakho kubathengi? Kweli candelo lilandelayo, siza kujonga ezona zenzo zokuthengisa elubala ezinceda ukomeleza ubudlelwane babathengi ngokuthembana.
Izixhobo kunye neengcebiso zokuphucula iindlela zokuthengisa ezicacileyo
Nanga amanyathelo ambalwa anokuthi athathwe ngabathengisi kunye nezixhobo zokuphumeza ezinokunceda ukuphucula iindlela zokuthengisa ezicacileyo.
Nika abathengi ulawulo ngakumbi - Okokuqala nokuphambili, kubalulekile ukunika abathengi ukuguquguquka malunga nendlela idatha yabo eqokelelwa ngayo kwaye isetyenziswa ngayo. Oku kubandakanya ukunikezela ngeenketho zokuphuma kunye nokuphuma kubathengi ababelana ngedatha yomntu. Isoftware yokuvelisa inkokeli inokuba sisixhobo esiluncedo ngokukuvumela ukuba wenze iifom zewebhusayithi eziqokelela ngokucacileyo idatha yabathengi.
Nxibelelana ngokucacileyo indlela idatha yomthengi ekhuselwe ngayo -Cacisa malunga nendlela oqokelela kunye nokusebenzisa ngayo idatha yabathengi. Cacisela abathengi ngezenzo ozenzayo ukukhusela idatha yabo okanye ukuba kukho naluphi na utshintsho olwenziwayo kwindlela ekhuselwa ngayo. Unokwenza oku ngokusebenzisa isixhobo sokuthengisa yonke into-nye ukulungelelanisa imiyalezo malunga nokukhuselwa kwedatha yabathengi kunye nokusetyenziswa kuwo onke amajelo okufikelela amaninzi.
Nikela ngexabiso lokwenyani kutshintshiselwano lwedatha -Abathengi bathi balukuhlwa ngamabhaso emali ngokutshintshiselana ngedatha yabo yobuqu. Cinga ngokunikezela ngenzuzo ebonakalayo kubathengi ngokutshintshiselana ngedatha yabo. Isoftware yovavanyo yindlela entle yokucela ngokuthe gca kwaye uqokelele idatha ngokutshintshiselana nomvuzo wemali.
I-53% yabathengi bazimisele ukwabelana ngolwazi lwabo lomntu ngokutshintshiselana nemivuzo yemali kunye ne-42% yeemveliso okanye iinkonzo zamahhala, ngokulandelanayo. Enye i-34% ithi bangabelana ngedatha yomntu ngokutshintshiselana ngezaphulelo okanye amakhuphoni.
Phendula - Ukuvuma izicelo zabathengi okanye iinkxalabo ngokukhawuleza nangokucacileyo kuya kunceda ukwakha ukuthembela, inyathelo eliphambili kumava athembekileyo omthengi. Izixhobo ezibonelela ngokuzenzekela ukuthengisa, ukwenza umntu, imidiya yoluntu, i-imeyile, kunye nemisebenzi yokuncokola inokunceda ishishini lakho ngokufanelekileyo nangokuphendula rhoqo kubathengi.
Cela impendulo – Ingxelo sisipho! Gcoba indlela amaqhinga akho okuthengisa aqhuba ngayo ngokuya ngqo kumthombo-abathengi bakho. Ukuqokelela ingxelo rhoqo kuvumela amaqela entengiso ukuba ahlengahlengise izicwangciso njengoko kufuneka. Isixhobo sophando lwemarike sinokukunceda uqokelele kwaye uhlalutye idatha xa uhlola abathengi bakho.
Qinisekisa ukuba unesicwangciso setekhnoloji yakho
Njengoko ndabelana ngasentla, zininzi iindlela zokusebenzisa izixhobo zokuxhasa ukuthengisa okusekuhleni, kodwa ukuba netekhnoloji akwanelanga. Kwi GetApp's 2021 Marketing Trends Survey:
I-41% yabaqalayo bathi abazange baqulunqe isicwangciso seteknoloji yabo yokuthengisa. Ngaphezu koko, iziqalo ezingenaso isicwangciso setekhnoloji yokuthengisa zingaphezulu kwamaxesha amane okunokuthi itekhnoloji yabo yokuthengisa ayihambelani neenjongo zabo zoshishino.
GetApp's 2021 Marketing Trends Survey
Ishishini lakho linokuba nomdla okanye ngoku lisebenzisa iindidi ezininzi zesoftware ukuqokelela idatha kunye nokunxibelelana neendlela zolwazi kunye nabathengi. Ukwenza uninzi lwetekhnoloji kunye nokuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwayo, kubalulekile ukwenza i isicwangciso sobuchwepheshe bokuthengisa kwaye uyilandele.
Xa kufikwa kwintengiso enyanisekileyo neselubala, kuninzi okusemngciphekweni—ukuthembeka, ukuthembana kwabathengi, kunye nokunyaniseka. Ezi ngcebiso ziyisiqalo sokulungiselela ukuguquka kwendawo ekukhuselweni kwedatha ngelixa uqinisa ubudlelwane nabathengi.
utyelelo GetApp uphononongo lwesoftware kunye nokuqonda kwengcaphephe ukukunceda wenze izigqibo ezicwangcisiweyo ezinolwazi.
GetApp's 2021 Top Technology Trends Survey yaqhutywa ukususela ngo-Agasti ukuya kuSeptemba 2021, phakathi kwabaphenduli abangama-548 kulo lonke elase-US, ukuchonga iimfuno zobuchwepheshe, imingeni, kunye neendlela zamashishini amancinci. Abaphenduli kuye kwafuneka babandakanyeke kwizigqibo zokuthenga iteknoloji kwiinkampani ezinabasebenzi aba-2 ukuya kuma-500 kwaye babambe isikhundla somphathi okanye ngaphezulu kwinkampani.
GetApp's Marketing Trends Survey yaqhutywa ngo-Epreli 2021 phakathi kwabaphenduli abangama-455 base-US ukuze bafunde ngakumbi malunga nentengiso kunye neendlela zobuchwepheshe. Abaphenduli bahlolwe kwiindima zokwenza izigqibo kwiintengiso, ukuthengisa, okanye inkonzo yabathengi kwiinkampani ezinabasebenzi aba-2 ukuya kuma-250.
tags: ingxelo yomthengiimfihlo yabathengiuphando lwabathengiukuthembela kwabathengiidatha yomthengiukhuseleko lwedatha yabathengiingxelo yabathengiIinkcukachaUkukhuselwa kwedathaumlingisiidatha gartneruphando lwe-gartnergetappGoogle chromeisicwangciso sobuchwepheshe bokuthengisaiindlela zentengisouphando lweendlela zokuthengisaidatha yakhoamava omntuipiiukulandelela abathengi kwi-intanethi
UMeghan Bazaman ngumhlalutyi ophezulu GetApp, ukwabelana ngemibono malunga neteknoloji yokuthengisa kunye nesoftware evelayo. Ufunde iNtengiso kwiDyunivesithi yaseTexas eAustin kwaye unamava okugubungela itekhnoloji, imidiya, impilo kunye ne-ecommerce ukusukela ngo-2011. Phambi kokujoyina. GetApp, UMeghan ulawule izifundo zophando zokuthengisa ezihlanganisiweyo kunye namanyathelo okuthengisa umxholo okhokelayo kwidatha ehamba phambili, ukuqonda kunye nenkampani yokubonisana. Unobuchule obukhethekileyo bokuqhuba uphando lophando, ukwenza imiboniso yedatha, kunye nokunikezela ngemibono ephambili kwabo bachaphazelekayo.
I-Queue-it: Yongeza iGumbi lokulinda elibonakalayo kwiWebhusayithi yakho ukuze ulawule uTrafikhi oluPhezulu
I-Brax: Yenza, Lungiselela, kwaye ulinganise iNtengiso Yakho Yomthonyama kwiDashboard enye